Fayyadamaa[App} Mobile Barbaachisoo kanneen Fayyadamaa ilaalaa - oroict.com
Home Barnoota Moobaayilaa Fayyadamaa[App} Mobile Barbaachisoo kanneen Fayyadamaa ilaalaa
Fayyadamaa[App} Mobile Barbaachisoo kanneen Fayyadamaa ilaalaa
Fayyadamaa[App] Mobile Barbaachisoo kanneen Fayyadamaa
Fayyadamaa[App} Mobile kanneen yoo fayyadamne waan irratti nu gargaaruu danda’an waan ta’eef mee gadi buufadhaa yaalaa ilaalaa.
1)IDM – Download Manager: Appn kun Kanaan dura Koompitara keenya irratti faayiloota saffisaan naqachuuf(download) gochuuf kan nu tajaajilaa ture yoo ta’u, amma immoo bilbiloota Android irrattis faayiloota saffisaan akka naqannuuf tajaajila kennaa jira.
2) Wi-Fi Map: App kun Jecha Darbii[Password] Wi-Fi tokkoo salphatti akka argannuufi Wi-Fi naanoo keenya jiru fayyadamuuf kan nu dandeessisuudha. Jecha darbii(password) Wi-Fi dhaabbata fayyadamuu barbaannee tokko argachuuf, App kana banuudhaan Kaartaa nuuf dhufu irraa Biyya Itoophiyaa filannee, itti aansuun magaalaa keessa jirru filanna. sana booda Wi-Fi Magaalota sana keessa jira hunda Jecha Darbii[password] isaanii wajjiin nuuf fida.
Haalima kanaan Wi-Fi naannoo keenya jiru filannee Jecha darbii isaa itti galchuun salphatti akka fayyadamnu nu taasisa.
3)Whristle Phone Finder: Mana keessan keessatti, iddoo hojiitti ykn lafa ta’etti Bilbila keessan iddoo keessan dhabdanii beektuu?… Eeyyen kun baratamaadha. Haala kamiin barbaaddanii argattu ree?
Kanaafuu furmaanni App kana Bilbila keessan irratti fe’achuudhaan salphatti arachuuf isin gargaara. Bilbila keessan irratti App kana yoo naqattan, yeroo bilbila keessan dhabdan kan isin irraa eegamu, tooftaa salphaa ta’e tokko qofaadha. Innis Fiiksuu/Siiksuudha. Yoo isin fiissitan Appn kun ni dammaqa, yeroo kana bilbilli keessan sagalee waamicha bilbila akka waan namnibiraa itti bilbilee dhageessisa. Sana booda iddoo bilbiilli keessan jir salphatti argachuu dandeessu.
4) 360 Security: Appn kun Bilbila keenya Qinqanii(virus, malware etc) irraa eeguudhaaf sadarkaa olaanaa qaba. Kanaafuu Qinqaniin yeroo ammaa sadarkaa olaanaa bilbiloota keenya miidhaa jiruuf furmaata guddaa ta’a.
5)True Caller: Fayyadmaan kun Namni kamuu gara bilbila keenyarratti yoo nuuf bilbilu Marsaalee hawaasummaa(Social media) inni bilbila nuuf bilile sanaan itti fayyadamaa jiru hunda nutti agarsiisa. hubadhaa Bilbila nama sanaa achiin duras qafoo keenya irratti olkeenyee(save) yoo hin goone ta’es.
Previous articleDhaabbanni Facebook Tajaajila NYAATA Toorarraa ajajachuu(Food Ordering Service) Eegale
Next articleFeesbuukiin keenya hatamuu maloota ittiin beekuu dandeenyu[how do you know if your facebook is hacked]
Abduljabbaar M October 18, 2017 at 12:15 am
App’ wwan asirraa aƙk buufannu nuu godhaa.
Yasin Aman October 18, 2017 at 5:57 am
hunda dura galata fi ulfina gudda isinif qabnu ibsun barbada.
gaffin koo: bilbila kiyya utuma fayyadama jiru SIM basee yoon deebisu password dhan cufate, enyu akka cufee (Ethiotelecom or google) hin beeku. garuu APP KANAF SABABA TA’EE HIN QABUU. Restore godhus sanuma. wanni na gargaruu dandessan jira ?? Galatoma.
Eenyummeessaa Feesbuukii BILBILAAN Baname akkamitti gara #E-MAIL jijjiirachuu dandeenna?
Abdisa Bencha Jara - January 25, 2018
Abdisa Bencha Jara - March 17, 2019
Akkaataa “copy fi Paste” cmd irratti uumtuu
Abdisa Bencha Jara - May 15, 2017
Kaartaa Google irraa Maqaa Sirreessuuf ykn Guutumatti haksiisuuf (Suggest edits to a place or...
Abdisa Bencha Jara - May 6, 2018
This Year : 17279
Total Visit : 188237
Total Hits : 548961